Q. (သက်တမ်းကုန်ဆုံးဖြင်း) ကြောင့်ငွေဖြည့်မရသည့်အခါဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်း
မင်္ဂလာပါ. ဆားဗစ်စင်တာဖြစ်ပါတယ်. မေးခွန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖြေကြားပေးပါမယ်.
고객님은 통신사에서 체류기간 만료로 충전이 실패 되었습니다.
》통신사에서 체류기간 만료로 충전 실패
မိမိဖုန်းဆင်းကဒ်ဝယ်ယူထားသော ဖုန်း company မှဗီဇာသက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းကြောင့်ဖုန်းလိုင်းဖြတ်တောက်ထားပါသဖြင့်ငွေဖြည့်သွင်းမရဖြစ်နေခြင်း
နိုင်ငံခြားသားကဒ်တွင် နေထိုင်မှုသက်တမ်းရှိ..မရှိ ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ၇န်။
သက်တမ်းတိုးပြီးဖြစ်နေပါက ဖုန်းလိုင်းဆားဗစ်စင်တာ (114) သို့ဆက်သွယ်ပြိး နိုင်ငံခြားသားကဒ် အရှေ့အနောက်ကိုဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ပို့ပေးပါက အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မည်။
နေထိုင်မှုသက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့်ဆိုင်ရာအချက်အလက်ကို immigration တွင် စုံစမ်းမေးမြန်းပါရန် (Tel: 1345 -မည်သည့်ဘာသာစကားနှင့်မဆိုထောက်ပံ့ပေးသည်)
ပါ့စပို့ဖြင့်ဝယ်ယူထားပါက ရက်ပေါင်း ၉၀ သာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဖုန်းလိုင်းပြတ်တောက်သွားပါလိမ့်မည်။
နိုင်ငံခြားသားကဒ်ဖြင့် ပြောင်းလဲမှတ်ပုံတင်ပါက မိမိနေထိုင်မှုသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်အထိ ဖုန်းလိုင်းအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
နီးစပ်ရာ ဖုန်းဆိုင်သို့သွားပြီး နိုင်ငံခြားသားကဒ်ဖြင့်ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲမှတ်ပုံတင်ပေးပါရန် ပြောဆိုအကူအညီတောင်းကြည့်ပါ။
ထပ်ပြီးအသေးစိတ်သိရှိချင်ပါက ဖုန်းလိုင်းဆားဗစ်စင်တာ (114) သို့ဖုန်းဆက်မေးမြန်းပါရန်။
ငွေဖြည့်ခြင်းမအောင်မြင်ခဲ့သော်လည်း ဘဏ်မှဖြတ်တောက်သွားသည့်ငွေပမာဏမှာ thePay Cash တွင်ဒီအတိုင်းကျန်ရှိနေပြီး၊တခြားဖုန်းနံပါတ်သို့ပြောင်းလဲငွေဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
ထပ်ပြီးအသေးစိတ်အကြောင်းအရာများကို http://m.thepay010.com တွင် လေ့လာကြည့်ရှုပါရန်။
ဆားဗစ်စင်တာ ☎ 1666-0146(မြန်မာဘာသာဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။)
Q. ပြည်ပဖုန်းခေါ်ဆိုရန် Cash ဖြင့်ငွေဖြည့်သွင်းခြင်း
မင်္ဂလာပါ။ ဆားဗစ်စင်တာဖြစ်ပါတယ် .မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမယ်
thePay Cash를 사용하는것을 강력하게 추천 드립니다.
thePay Cash ကို အသုံးပြုကြည့်ခြင်းကို တိုက်တွန်းညွှန်ပြပေးချင်ပါတယ်.
thePay Cash는 더욱 간편하고 신속하게 결제를 도와줍니다.
thePay Cash က ပိုပြီး လွယ်ကူအဆင်ပြေစေရေးအတွက်ဖုန်းတွင် ငွေဖြည့်ပေးခြင်းကို ကူညီပါလိမ့်မယ်.
[kt the+ 1] "국제전화충전"을 클릭합니다.
"ပြည်ပ ဖုန်းဆက်ရန်ငွေဖြည့်ခြင်း" ကိုနှိပ်ပေးပါရန်။
[kt the+ 2] 번호 확인후 충전하실 금액을 선택합니다.
ဖြည့်သွင်းမည့်ဖုန်းနံပါတ်ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး ငွေဖြည့်သွင်းမည့်ပမာဏကို ရွေးချယ်ပေးပါရန်။
[kt the+ 3] 충전정보를 재확인 하시고 ‘OK’ 버튼을 클릭합니다.
အကြောင်းအရာများကို နောက်တကြိမ်ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး "OK"ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးပါရန်။
[kt the+ 4] 한번 더 금액을 확인 하시고 ‘OK’버튼을 클릭합니다.
နောက်တကြိမ် ငွေဖြည့်သွင်းမည့်ပမာဏကို ပြန်စစ်ဆေးပြီး "OK" ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးပါရန်။
[kt the+ 5] 5~10초동안 기다려 주시면 충전내역에서 결과를 확인 할 수 있습니다.
5~10 စက္ကန့် စောင့်ဆိုင်းပေးရန်လိုအပ်ပြီးHistory တွင် ငွေဖြည့်သွင်းသည့်ရလဒ်ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
Q. ပြည်ပဖုန်းဆက်ခြင်းသို့ ဘဏ်အကောင့်မှ ငွေဖြည့်ခြင်း
မင်္ဂလာပါ။ ဆားဗစ်စင်တာဖြစ်ပါတယ်. မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမယ်။
국제전화 전용 은행계좌로 금액을 충전하는 방법
ပြည်ပဖုန်းဆက်ရန်အတွက် သီးသန့် ဘဏ်အကောင့်မှတဆင့် ငွေဖြည့်သွင်းခြင်း နည်းလမ်း
တကြိမ်ငွေဖြည့်ကြည့်ရုံဖြင့် လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်သော thePay cash ကို အသုံးပြုခြင်းကို ညွှန်ပြပေးစေချင်ပါတယ်.
[kt1] "국제전화충전"을 클릭합니다.
[kt2] 번호 확인후 충전하실 금액을 선택합니다.
မိမိဖြည့်ချင်သောဖုန်းနံပါတ်ကို စစ်ဆေးပြီး ငွေဖြည့်သွင်းချင်သောပမာဏကို ရွေးချယ်ပေးပါရန်။
အချက်အလက်များကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး OK ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးပါရန်။
1-1 ‘은행계좌’ 버튼을 클릭을 합니다.
ဘဏ်အကောင့် ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးပါရန်။
1-2 입금하실 은행을 선택합니다.
ငွေဖြည့်သွင်းမည့် ဘဏ်နာမည်ကို ရွေးချယ်ပေးပါရန်။
[kt5]은행을 변경하실려면 "은행변경" 버튼을 클릭합니다.
ဘဏ်နာမည်ကို ပြောင်းလဲချင်ပါက "ဘဏ်နာမည်ပြောင်းလဲခြင်း"ဆိုသည့်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပေးပါရန်။
(ပုံမှန်အားဖြင့် NH Bank ဖြင့် ဖော်ပြထားပါလိမ့်မည်)
[kt6] 팝업창이 나오면 "확인"을 클릭합니다.
မက်ဆေ့ပေါ်လာရင် " OK" ကိုနှိပ်ပေးပါရန်။
[kt7] 마찬가지로 변경이 완료되면 "확인" 버튼을 클릭합니다.
နည်းလမ်းပုံစံတူဖြင့် ပြောင်းလဲပြီးဆုံးပါက OK ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးပါရန်။
[kt8] 다시 한번 송금할 은행과 계좌번호를 확인합니다.
နောက်တကြိမ် ငွေလွဲထည့်မည့် ဘဏ်နာမည်နှင့် ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်ကို ပြန်စစ်ဆေးပေးပါရန်။
6-1 계좌로 송금을 한후 "새로고침"버튼을 누릅니다.
ဘဏ်အကောင့်မှတဆင့်ငွေလွဲထည့်ပြီးနောက် ပုံပါအတိုင်း နံပါတ် 1 ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးပါရန်။
6-2 변경된 잔액을 꼭 확인해 보세요.
ပြောင်းလဲသွားသော လက်ကျန်ငွေပမာဏကို မဖြစ်မနေ ပြန်စစ်ဆေးပေးပါရန်။
Q. (ပြည်ပဖုန်း) ကဒ်ဖြင့် ငွေဖြည့်ခြင်း
မင်္ဂလာပါ. ဆားဗစ်စင်တာဖြစ်ပါတယ်..မေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမယ်.
국제전화요금 카드로 충전하는 방법을 알려드리겠습니다.
ပြည်ပဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်းကို ကဒ်ဖြင့်ဖြည့်သွင်းပုံနည်းလမ်းကို ဖော်ပြပေးပါမယ်။
တကြိမ် ငွေဖြည့်သွင်းရုံဖြင့်လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်သော "thePay cash" ကို အသုံးပြုခြင်း ကို ညွှန်ပြပေးပါမယ်။
ပြည်ပဖုန်းခေါ်ဆိုရန်ငွေဖြည့်ခြင်း ဆိုသည့်ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးပါရန်။
မိမိဖြည့်ချင်သည့်ဖုန်းနံပါတ်ကို ပြန်စစ်ဆေးပြီး ဖြည့်သွင်းမည့်ငွေပမာဏကို ရွေးချယ်ရန်။
ငွေဖြည့်မည့်အကြောင်းအရာများကို နောက်တကြိမ်ပြန်စစ်ဆေးပြီး "OK" ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးပါရန်။
[카드3] 카드번호(저장가능)와 유효기간을 입력해주세요.
ကဒ်နံပါတ်(သိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်း) နှင့် ကဒ်သက်တမ်းကုန်ဆုံး လ။ ခုနှစ်ကို ရိုက်ထည့်ပေးပါရန်။
[카드4] "결제"버튼을 클릭하세요.
ငွေပေးခြင်း ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးပါရန်။
[카드5] thePAY Cash에 결제금액이 예치됐습니다."OK"를 클릭하세요.
thePay Cash တွင် ပေးချေမည့်ငွေပမာဏကို Deposit လုပ်ပြီးပါပြီ. OK ကိုနှိပ်ပေးပါရန်။
ငွေဖြည့်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာမျက်နှာပြင်တွင် ငွေဖြည့်သွင်းပြီးနောက် Historyတွင် ငွေဖြည့်ရလဒ်ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်သည်။
Q. (အသားကဒ်ကိုးရီးယားပြည်တွင်းဖုန်း)တွင် Cash ဖြင့်ငွေဖြည့်သွင်းခြင်း
မင်္ဂလာပါ ..ဆားဗစ်စင်တာဖြစ်ပါတယ်..မေးခွန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြန်ဖြေပေးပါ့မယ်.
캐쉬로 간편하게 마음껏 충전해보세요.
Cash ဖြင့်မိမိစိတ်တိုင်းကျငွေဖြည့်နိုင်ပါသည်။
캐쉬를 사용하면 사용이 더욱 간편해 집니다.
Cash ကို အသုံးပြုပြီး ငွေဖြည့်ပါက ပိုမိုလွယ်ကူနိုင်ပါသည်။
[선불폰1] ‘모바일(음성/데이터)’ 버튼을 클릭합니다.
"Mobile (Voice/Data) ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးပါရန်။
[선불폰2] 상품선택 선불폰 충전(음성/데이터)
မိမိငွေဖြည့်ချင်သောအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ရန် (Voice/ Data)
[선불폰3] Voice 또는 Data - 원하는 상품을 클릭합니다.
Voice သို့မဟုတ် Data ..မိမိ ဖြည့်ချင်သော အမျိုးအစားကို နှိပ်ရန်။
[선불폰4] 충전할 금액을 선택합니다.
မိမိဖြည့်ချင်သော ငွေပမာဏကို ရွေးချယ်ရန်။
[선불폰5] 한번 더 금액을 확인 하시고 ‘충전’버튼을 클릭합니다.
နောက်တကြိမ် ဖြည့်မည့်ငွေပမာဏကို ပြန်စစ်ဆေးပြီး "ငွေဖြည့်ခြင်း" ခလုတ်ကိုနှိပ်ရန်။
[선불폰6] 충전정보를 첵크하시고 "OK"를 눌러주세요.
ငွေဖြည့်မည့်ဖုန်းနံပါတ်နှင့်ငွေဖြည့်မည့်ပမာဏကို ပြန်စစ်ဆေးပြီး "OK"ကို နှိပ်ရန်။
Q. (အသားကဒ်ကိုးရီးယားပြည်တွင်းဖုန်း)ဘဏ်အကောင့်ထဲက ငွေဖြည့်ခြင်း
*တကြိမ်ငွေဖြည့်ရုံဖြင့် လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်သော "thePay cash"ကိုအသုံးပြုနိုင်ခြင်းကို ညွှန်ပြပေးချင်ပါတယ်.
-유형별 thePay 충전방법-
"thePay"충전하는 종류와 각각의 충전방법은 다음과 같습니다. 천천히 따라해 보세요!
"thePay"ဖြင့်ငွေဖြည့်နိုင်သော အမျိုးအစားနှင့်အမျိုးမျိုးသောငွေဖြည့်နည်းလမ်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက်လုပ်ကြည့်ပေးပါ!
Mobile (voice/data)ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးပါ။
မိမိဖြည့်ချင်သော အမျိုးအစားကို ရွေးပါ ( voice /data)
[선불폰3] "Voice" 또는 "Data" => 원하는 상품을 클릭합니다.
"Voice " သို့မဟုတ် "Data "=> ဖြည့်ချင်သောအမျိုးအစားကို ရွေးပါ။
မိမိဖြည့်ချင်သော ပမာဏကို ရွေးချယ်ပါ။
[선불폰5] 한번 더 금액을 확인 하시고 "충전" 버튼을 클릭합니다.
နောက်တကြိမ် ထပ်စစ်ဆေးပြီး "ငွေဖြည့်ခြင်း" ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးပါ။
1-1. "은행계좌" 버튼을 클릭을 합니다.
1-2. 입금하실 은행을 선택합니다.
ဘဏ်နာမည်အပြောင်းအလဲ လုပ်ချင်ပါက "ဘဏ်ပြောင်းလဲခြင်း"ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးပါရန်။
(ပုံမှန်အားဖြင့် NH Bank ဖြင့်ဖော်ပြထားပါလိမ့်မည်)
[선불폰8] 팝업창이 나오면 "확인"을 클릭합니다.
မက်ဆေ့ပေါ်လာရင် OK ကိုနှိပ်ပေးပါရန်။
[선불폰9] 마찬가지로 변경이 완료되면 "확인" 버튼을 클릭합니다.
ပြောင်းလဲခြင်း ပြီးဆုံးပါက OK ကိုနှိပ်ပေးပါရန်။
[선불폰10] 다시 한번 송금할 은행과 계좌번호를 확인합니다.
နောက်တကြိမ် ငွေလွဲထည့်မည့် ဘဏ်နာမည်နှင့် ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်ကို ပြန်စစ်ဆေးပါ။
6-2. 은행결제후 변경된 잔액을 꼭 확인해 보세요.
ပြောင်းလဲသွားသော လက်ကျန်ငွေပမာဏကို မဖြစ်မနေ ပြန်လည်စစ်ဆေးပေးပါရန်။
Q. [အသားကဒ်ဖုန်း] ကဒ်ဖြင့်ငွေဖြည့်ခြင်း
* တစ်ကြိမ်ငွေဖြည့်ရုံဖြင့်လွယ်ကူစားအသုံးပြုနိုင်သော "thePay cash"ကိုအသုံးပြုနိုင်ခြင်းကို တိုက်တွန်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်. CLICK!
(အသားကဒ်ဖုန်း) " မိုဘိုင်း(ဖုန်းပြောဆိုခ၊ဒေတာ)"ဆိုသည့်ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးပါရန်။
(အသားကဒ်ဖုန်း) မိမိဖြည့်ချင်သည့်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရန်။(voice /data)
(အသားကဒ်ဖုန်း) Voice နှင့် Data ထဲမှ မိမိအသုံးပြုချင်သော အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်နှိပ်ရန်။
(အသားကဒ်ဖုန်း) ဖြည့်ချင်သော ငွေပမာဏကို ရွေးချယ်ရန်။
(အသားကဒ်ဖုန်း) ငွေပမာဏကို နောက်တကြိမ်ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး "ငွေဖြည့်ခြင်း"ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးပါရန်။
(အသားကဒ်ဖုန်း) ဘဏ်ကဒ်နံပါတ်(ရေရှည်အသုံးပြုရန်အတွက် သိမ်းဆည်းထားနိုင်)နှင့်ဘဏ်ကဒ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်လ.ခုနှစ်ကို ရိုက်နှိပ်ပါရန်။
(အသားကဒ်ဖုန်း) "ငွေပေးချေခြင်း"ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးပါရန်။
(အသားကဒ်ဖုန်း) thePay Cash တွင် ငွေပေးချေရန်ပမာဏ ကြိုတင်ငွေဖြည့်သွင်းပြီးပါက OK ခလုတ်ကိုနှိပ်ရန်။
ငွေဖြည့်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်ကို history မျက်နှာပြင်တွင် ပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း။
Q. ပြည်ပသို့ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း 00796 အသုံးပြု နည်းလမ်း
မင်္ဂလာပါ။ ဆားဗစ်စင်တာဖြစ်ပါတယ်..မေးခွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြိး ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမယ်။
thePay ဖြင့်ငွေဖြည့်သွင်းပြီးသည့်အခါ အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် kt00796 ပြည်ပဖုန်းဆက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
1. ပြည်ပသို့ဖုန်းဆက်ခြင်း: 00796+ နိုင်ငံကုဒ်နံပါတ် (95) + ဖုန်းနံပါတ် + call
2. ပြည်ပသို့ဖုန်းဆက်ခြင်း: 080-33-00796 + call + ဖုန်းနံပါတ် #
3. ဘာသာစကားပြောင်းလဲခြင်း : 00796+call + 18#
4. ကဒ်နံပါတ် စစ်ဆေးခြင်း : 00796+ call + 77#
5. လက်ကျန်ငွေစစ်ဆေးခြင်း :00796+call + 14#
6. လက်ကျန်ငွေပြောင်းထည့်ခြင်း :00796+call+ 11# ဖုန်းကဒ်အသစ်နံပါတ်#
====(2016 ခုနှစ်အရ အောက်ပါ နှုန်းထားဖြစ်ပါသည်)
Q. မိမိရဲ့ thePay cash နှင့် Bonus point ကိုမမြင်ရ(သို့) ပျောက်ဆုံးသွားပါက -
မင်္ဂလာပါ . ဆားဗစ်စင်တာဖြစ်ပါတယ်. မေးခွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြန်ဖြေပေးပါ့မယ်။
မိမိရဲ့ ဖုန်းနံပါတ် (သို့) တခြားဖုန်း ပြောင်းလဲအသုံးပြုပါက ဆော့ဝဲမှ အချက်အလက်များပျောက်ဆုံးသွားနိုင်ပါသည်။
ကဒ်ပြောင်းထည့်ခြင်း(သို့) တခြားဖုန်းပြောင်းလဲ အသုံးပြုခဲ့သည်ဆိုရင်လဲ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် အီးမေးလ်ကို ယခင်နှင့်အတူ အသုံးပြုပေးပါရန်။
1. ဖုန်းနံပါတ်နှင့် အီးမေးလ်ကို စစ်ဆေးပါရန်။ အီးမေးလ်ကို ယခင်နှင့်အတူအသုံးပြုပေးပါရန်။
2. နောက်တကြိမ် ပြန်စစ်ဆေးကြည့်ပါရန်။
Q. အသားကတ်ဖြည့်ရာမှာ အဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်..ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
မင်္ဂလာပါ..ဆားဗစ်စင်တာဖြစ်ပါတယ် . မေးခွန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြိး ဖြေကြားပေးပါမယ်။
" History" ကို နှိပ်ပါက အဆင်မပြေရသည့်အကြောင်းအရင်းနှင့် ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရန် နည်းလမ်းကို ဖော်ပြထားပေးပါသည်။
1. ငွေဖြည့်ရာတွင် ငွေမ၀င်ပါက - > " ? " ခလုတ်ကို နှိပ်ပါက အသေးစိတ် ရှင်းလင်းချက်ကို ဖတ်ရှုနိုင်ခြင်း ။
ဖုန်းလိုင်းကုမ္ပဏီကို ရှာဖွေရာတွင် မတွေ့ရှိပါက -
၁)ငွေဖြည့်ခြင်းကို နောက်တကြိမ် ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန်။
၂) 114 သို့ ဖုန်းဆက်ပြီး မိမိဖုန်းနံပါတ်သည် မည်သည့်ဖုန်းလိုင်းကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်းမေးမြန်းစစ်ဆေးရန်။
၃) thePay ဆားဗစ်စင်တာ သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန်။
နေထိုင်မှု သက်တမ်း ကုန်ဆုံးခြင်းကြောင့် ငွေသွင်းရာတွင် အဆင်မပြေဖြစ်ပါက -
၁) မိမိနေထိုင်မှု သက်တမ်းဗီဇာ တိုးရန်။
၂) မိမိဝယ်ထားသော ဖုန်းလိုင်းကုမ္ပဏီတွင် ဖုန်းလိုင်းပြန်လည်ဖွင့်ပေးရန်တောင်းဆိုရန်။
၃) ငွေဖြည့်သွင်းခြင်းကို နောက်တကြိမ် ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရန်။
[Case-3] ဖုန်းလိုင်းကုမ္ပဏီကြောင့် ငွေဖြည့်သွင်းရာတွင် အဆင်မပြေဖြစ်နေခြင်း -
၁) ငွေဖြည့်သွင်း မရသော အမျိုးအစား
၂) ပါ့စပို့ သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်း (နေထိုင်မှု သက်တမ်းကုန်ဆုံး)
၃) ဖုန်းလိုင်းကုမ္ပဏီမှ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ ဖြတ်တောက်ထားခြင်း။
Q. [Contact] သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာရှိရင် ဘယ်လို ဆက်သွယ်ရမလဲ ?
thepay ကို အသုံးပြုရင်းနဲ့ အဆင်မပြေတဲ့အချက်များ ရှိရင် ဆားဗစ်စင်တာကို ဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်.
1. "thePay"ကို အရင်ဆုံး ဖုန်းမှာ ထည့်သွင်းပါမည်။
2. ညာဘက် အပေါ်ထောင့်မှာ မေးမြန်းစုံစမ်းရန်ဆိုတဲ့ ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးပါရန်။
3. " HELP DESK"ဆိုတဲ့ စာကြောင်းကို နှိပ်ပေးပါရန်။
4. သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာများရှိပါက ဘာသာစကားကို ရွေးချယ်ပြီးနောက် မေးချင်သည့်အကြောင်းအရာကိုရေးသားပြီး ပို့ပေးပါရန်။
5. "CALL" ခလုတ်ကို နှိပ်ပါက အလိုအလျောက် ဆားဗစ်စင်တာ သို့ဖုန်းလှမ်းချိတ်ပေးပါသည်။
Q. [Recharge] thePay ငွေဖြည့်ပြီး ရလဒ်ကို ဘယ်လို စစ်ဆေးလို့ရပါသလဲ ?
ငွေဖြည့်ခြင်းကိုနှိပ်ပြီးပါက 10 sec~1minsအတွင်းမှာ လုပ်ဆောင်မှု ပြီးစီးပြီး ရလဒ်ကိုစစ်ဆေးနိုင်သောမျက်နှာပြင်တွင် အောင်မြင်ခြင်း၊မအောင်မြင်ခြင်း ကိုကြည့်ရှုနိုင်( ၀င်လာသောမက်ဆေ့တွင်)
1.5sec~10 sec စောင့်ဆိုင်းပေးပါ။
2. ရလဒ်ကိုစစ်ဆေးနိုင်သော History တွင် ကြည့်ရှုပေးပါ။
3. : မအောင်မြင်ရသောအကြောင်းအရာကို မက်ဆေ့(သို့) အသေးစိတ်အချက်အလက်ပုံစံကွက်ဖြင့်အသိပေးပါသည်။
ငွေဖြည့်မအောင်မြင်ပါက ဆားဗစ်စင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပေးပါရန်။
Q. [Call] thePay ငွေဖြည့်ခဲ့သော်လည်း 00796 ပြည်ပ ခေါ်ဆိုလို့ မရခဲ့ပါက!!
thepay CASHဖြည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်..CASH လက်ကျန်ငွေ စစ်ဆေးပြီးနောက် ပြည်ပဖုန်းငွေဖြည့်ရန်ကို ရွေးချယ်ပြီးနောက် ငွေဖြည့်သွင်းပေးပါရန်။
1. Thepay CASH လက်ကျန်ကိုစစ်ဆေးခြင်း နှင့် Mobile ဖုန်းပြောဆိုခ၊ ဒေတာဆိုသည့် ခလုတ်ကို နှိပ်ရန်။
2. ပြည်ပဖုန်းခေါ်ဆိုရန် 00796 ငွေဖြည့်ခြင်းကို ရွေးချယ်ရန်။
3. ငွေဖြည့်ရမည့်အချက်အလက်တွေကို ဖြည့်စွက်ရွေးချယ်ပြီး ငွေဖြည့်ခြင်း ကိုနှိပ်ရန်။
4. ငွေဖြည့်ရမည့်နံပါတ်ကို နောက်တကြိမ်ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး OK ကိုနှိပ်ရန်။
5. ငွေဖြည့်ရလဒ်ကို စစ်ဆေးရန်။
Q. [Payment] ဘဏ်အကောင့်ထဲကနေ ငွေဖြည့်ခြင်းကိုဘယ်လို လုပ်ရမလဲ?
မင်္ဂလာပါ.. ဆားဗစ်စင်တာ ဖြစ်ပါတယ်.. မေးခွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြေကြားပေးပါမယ်.
thePay ကို ထည့်သွင်းပြီး အလိုအလျောက် သုံးစွဲသူ အတွက် သီးသန့် ဘဏ်အကောင့်နံပါတ် ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်၊
မိမိဆန္ဒရှိသော ဘဏ်ကိုရွေးချယ်ပြီးနောက် ပေါ်လာသော ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်တွင် ငွေဖြည့်သွင်းပါက အလိုအလျောက် ငွေဖြည့်သွင်း နိုင်ပါတယ်.
1. " Deposit thePay"
ကြိုတင် ငွေဖြည့်ခြင်း thePay
2-1. ဘဏ်အကောင့် ခလုပ်ကို နှိပ်ပါရန်။
2-2. သုံးစွဲသူမှ မကြာခဏ အသုံးပြုဖြစ်သော ဘဏ်ကို ရွေးချယ်ပါရန်။
3. ဘဏ် ရွေးချယ်မှု ပြီးဆုံးလျှင် ဘဏ်ပြောင်းလဲခြင်း ဆိုတဲ့ ခလုပ်ကို နှိပ်ပေးပါရန်။
4. မက်ဆေ့ ၀င်လာရင် "Ok" ကို နှိပ်ပေးပါရန်။
5. ဘဏ်အကောင့်နံပါတ် နှင့် ငွေဖြည့်သွင်းရာမှ ထောက်ပံ့ပေးသော နံမည် ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပေးရန်။
Q. [Point] thePay ရဲ့ အပိုထည့်ပေးတဲ့ ပွိုင့်ကို ဘယ်လိုအသုံးပြု ရမလဲ?
မင်္ဂလာပါ ..ဆားဗစ်စင်တာ ဖြစ်ပါတယ်..မေးခွန်းများကို ပြန်ဖြေပေးပါမယ်။
အသားကတ် ငွေဖြည့်ရာတွင် 5% စီ အပိုဆောင်း လက်ဆောင်ထည့်သွင်းပေးသဖြင့် ငွေဖြည့်လာသည်နဲ့အမျှ ပွိုင့်တွေ တဖြည်းဖြည်းများလာပြီး ငွေဖြည့်သွင်းနိုင်မည့် ပမာဏ အနေအထားဖြစ်လာပါက မိမိပိုက်ဆံ သီးသန့် ထည့်ဖြည့်စရာမလိုတော့ဘဲ ပွိုင့် ကို အသုံးပြု ပြီး ငွေဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
1-1 Bonus point အပိုလက်ဆောင် ထည့်သွင်းပေးသော ပွိုင့်ကို စစ်ဆေးရန်။
1-2 မိုဘိုင်း ဖုန်းပြောဆိုခ. ဒေတာ ဆိုသည့်ခလုတ်ကို နှိပ်ရန်။
2. ငွေဖြည့်သွင်းမည့် အမျိုး အစား ကို ရွေးချယ်ရန်။
3-1 Bonus point ဆိုသည့် နေရာတွင် ပွိုင့် ကို အသုံးပြုရန် အတွက် လေးထောင့်ကွက်တုံးတွင် အမှတ်ခြစ်ပေးပါရန်။
3-2 ငွေဖြည့်သွင်းခြင်း ကို နှိပ်ရန်။
Q. [Cash] thePay CASH ဆိုတာ ဘာလဲ ? ဘယ်လိုမျိုး အသုံးပြုရမလဲ ?
မင်္ဂလာပါ..ဆားဗစ်စင်တာ ဖြစ်ပါတယ်..မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြေကြားပေးပါမယ်။အသုံးပြုသည့်အခါတိုင်း ငွေဖြည့်သွင်းနေရသည်ကို အလုပ်ရှုပ်သလို ခံစားမိပါက ဖြည့်သွင်းချင်သော ပမာဏကို အရင် ကြိုတင် ဖြည့်ထည့်ထားပြီး အမျိုးအစားများထဲမှ ဖြည့်သွင်းချင်သောအမျိုအစားကို ရွေးချယ်ပါက ပိုမို ရှင်းလင်းလွယ်ကူပါသည်။
ငွေဖြည့်သွင်းရာတွင် မအောင်မြင်ခြင်း(သို့) error ပေါ်နေပါက thepay CASH ဖြင့် ပြန်လည် ဖြည့်ပေးပါမည်။ နောက်တကြိမ် ငွေဖြည့်သွင်းရာတွင် (သို့) တခြား သုံးစွဲနိုင်သော အမျိုး အစားကို ရွေးချယ်ပြီး ပြန်လည် ဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
1. Deposit thepay CASH လို့ရေးသားထားသော အနီရောင် ဘားတန်းခလုတ်ကို နှိပ်ပေးပါရန်။
2. ငွေပေးချေရမည့် ပုံစံကို ရွေးချယ်ရန် ( ကဒ် )
3. ငွေဖြည့်သွင်းရာတွင် thepay CASH ကို ရွေးချယ်ရန်။ ( လက်ကျန်ငွေ မရှိပါက ပုံပါ လေးထောင့်တုံးကွက်တုံး ပေါ်လာမည် မဟုတ်ပါ )
4. CASH လက်ကျန် စစ်ရန်
Q. [Recharge] CASH ငွေဖြည့်သွင်းသည့် နည်းလမ်း
မင်္ဂလာပါ ။ ဆားဗစ်စင်တာ ဖြစ်ပါတယ်.. မေးခွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြေကြားပေးပါမယ်။
လွယ်ကူပြီး မြန်ဆန်သော "thepay" CASH ငွေဖြည့်သွင်းသည့် နည်းလမ်း !
1. application ကို အရင်ဆုံး ထည့်သွင်းပေးပါ။
2 ‘Deposit thePay cash’ ဆိုသည့် အနီရောင် ခလုတ် ဘားတန်းကို နှိပ်ပေးပါရန်။
3-1 ‘credit/check card' ဆိုသည့် ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးပါရန်။
3-2 ငွေဖြည့်သွင်းမည့် ပမာဏကို မိမိ ဖြည့်သွင်းချင်သော ပမာဏကို ရွေးချယ်ရန်။
4. ဘဏ်ကဒ်ဖြင့် ငွေပေးချေရာတွင် ဘဏ်ကဒ်မျက်နှာပြင်ရှိ ဂဏန်းများနှင့် ကဒ်တွင်ပါရှိသော ဘဏ်ကဒ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့် လ.ခုနှစ်ကို ကြည့်ပြီး ရိုက်ထည့်ပေးပါရန်။
5. မကြာခဏ ငွေဖြည့်သွင်းသော သုံးစွဲသူ ဖြစ်ပါက မိမိရဲ့ ကဒ်နှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။
/အချက်အလက်ကို ရိုက်ထည့်ဖြည့်ရာတွင် နမူနာ ဖော်ပြထားသော ပုံကို ဥပမာယူပြီး ရိုက်ထည့်ပေးပါရန်။
6. ဂဏန်းများကို ရိုက်ထည့် ဖြည့်စွက်ပြီးပါက ‘payment’ ဆိုသည့် ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးပါရန်။
-통장으로 계좌충전하는 방법-
7-1 "은행계좌"를 클릭해주세요.
7-2 더페이 캐쉬에 입금할 은행을 선택해주세요.
8. 은행선택이 완료되었으면 '은행변경'버튼을 눌러주세요
9. 알림창이 뜨면 OK"를 클릭해 주세요.
10. 은행 변경이 성공적으로 변경되었습니다.
11. 은행계좌번호와 예금자 이름을 확인할 수있습니다.
Q. [Recharge] အသားကတ် (ကိုးရီးယားပြည်တွင်း) ငွေဖြည့်ခြင်းကို ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ?
မင်္ဂလာပါ။ ဆားဗစ်စင်တာ ဖြစ်ပါတယ်. မေးခွန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖြေကြားပေးပါမယ် ။
အသားကတ် ငွေဖြည့်ခြင်းကို ရွေးချယ်ပြီး ငွေဖြည့်သွင်းချင်သော ဖုန်းနံပါတ်. ဖြည့်သွင်းချင်သော ငွေပမာဏကို ရွေးချယ်ပြီး ငွေးပေးချေပါက အလိုအလျောက် ငွေဖြည့်သွင်းခြင်း လုပ်ဆောင်မှု ပြီးဆုံးပါသည်။
1. မိုဘိုင်း ဖုန်းပြောဆိုခ ။ ဒေတာ ဆိုသည့် ခလုတ်ကို နှိပ်ရန်။
2. ငွေဖြည့်မည့် အမျိုး အစားတွင် အပေါ်ဆုံးမှ အသားကတ်ဖြည့်သွင်းခြင်း ခလုတ်ကို ရွေးချယ်ရန် ( Voice / Data )
3. မိမိ ငွေဖြည့်သွင်းချင်သော ဖုန်းနံပါတ်ကို ရွေးချယ်ရန်။
4. ငွေဖြည့်သွင်းမည့် အမျိုးအစား ( Voice / Data ) တွင် ဖုန်းပြောရန်အတွက်ဆိုပါက ( Voice ) ကို ရွေးချယ်ရန်။
5. အောက်ဆုံးမှ အနီရောင် ဘားတန်း ငွေဖြည့်ခြင်း ကို နှိပ်ရန်။
4. “thepay” လက်ကျန်ငွေ ကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
Q. [Seach] အိုင်ဖုန်း (app-store) တွင် thePay ကို ဒေါင်းလို့မရပါက !!
မင်္ဂလာပါ။ ဆားဗစ်စင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြေကြားပေးပါမယ်။
ပုံပါအတိုင်း အစဉ်လိုက် လုပ်ဆောင်ရန် : Setting -> General-> About-> version
Q. [Seach] Android (Play-Store) မှ thePay ကို ရှာလို့ မတွေ့ပါက !!
မင်္ဂလာပါ ။ ဆားဗစ်စင်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ မေးခွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြေကြားပေးပါမယ် ။
ဖြည်းဖြည်းချင်း ပုံပါအတိုင်း အစဉ်လိုက် လုပ်ကြည့်ပေးပါရန်။
Android 4.4 ဗားရှင်း အထက် ဖြစ်အောင် Update လုပ်ပေးပါရန်။
ပုံပါအတိုင်း အစဉ်လိုက်လုပ်ပေးပါရန်: Setting ->About device->Software info-> Adroid version
Q. [Install] Android အင်ဒရိုက် ဖုန်းတွင် ဘယ်လို ထည့်သွင်းရမလဲ ?
မင်္ဂလာပါ။ ဆားဗစ်စင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မေးခွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြေကြားပေးပါမယ်။
Android google (Play Store ) တွင် ထည့်သွင်းသည့် နည်းလမ်း -
အောက်တွင် ပါသည့် ပုံပါအတိုင်း ဖြည်းဖြည်းချင်း လိုက်လုပ် ကြည့်ပေးပါရန်။
1. Android အင်ဒရိုက်ဖုန်းတွင် Application ကို ဒေါင်းချင်ပါက Play-store ကို ထည့်သွင်းပါရန်။
2. Application ဒေါင်းရန် ရိုက်ထည့် ရှာသည့် နေရာတွင် ကလစ် လုပ်ပါရန်။
3. ရိုက်ထည့်ရှာသည့် နေရာတွင် 'thePay' ကိုရိုက်ထည့်ပြီး ရှာဖွေပါရန်။
4. ထွက်ရှိလာသော application များထဲမှ ပုံပါအတိုင်း thePay application ကို ရှာဖွေပါရန်။
5. install ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး 'thePay' ကို ဒေါင်းလော့ လုပ်ပါရန်။
6. ပုံပါ မက်ဆေ့ ပေါ်လာရင် ''OK" ကို နှိပ်ရန်။
7. application များ ထဲမှ thePay ကို ရှာဖွေပြီး နှိပ်ရန်။
8. အသုံးပြု ချင်သော ဘာသာစကားကို ရွေးချယ်ရန်။
9. အသုံးပြုရာတွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များနှင့် ပတ်သက်ပြီး သိရှိပါကြောင်းကို "OK" ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး အတည်ပြုပေးပါရန်။
ကဲ ..အခုမှ စပြီး 'thePay' ကို စတင်အသုံးပြု ကြရအောင်.
Q. [Install] အိုင်ဖုန်း IOS တွင် ဘယ်လို ထည့်သွင်းရမလဲ ?
ငွေပေးချေသည့် နည်းလမ်း ( ကဒ် / ဘဏ် )
credit card , check card ဘဏ်ကဒ်ထဲမှ ငွေပေးချေနည်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဖြည်းဖြည်းချင်း လိုက်လုပ်ကြည့်ပေးပါ။
credit card , check card ဘဏ်ကဒ်ထဲမှ ငွေပေးချေနည်း
[카드1] ‘thePAY cash ငွေဖြည့်သွင်းခြင်း ’ ခလုတ်ကို နှိပ်ပါရန်။
2-1 credit card ( check card ) ခလုတ်ကို နှိပ်ပါရန်။
2-2 ဖြည့်သွင်းချင်သော ငွေပမာဏကို ရွေးချယ်ပါရန်။
3-1 မကြာခဏ အသုံးပြု သော သုံးစွဲသူဖြစ်ပါက ဘဏ်ကဒ် အချက်အလက်ကို အမြဲ ရိုက်ထည့်စရာမလိုအောင် သိမ်းဆည်းခြင်း Saveကို နှိပ်ထားပါက ပိုမို လွယ်ကူ မြန်ဆန်စွာ အသုံးပြု နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
3-2 ပုံပါ အတိုင်း ဘဏ်ကဒ် မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ဂဏန်းများနှင့် ဘဏ်ကဒ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့် လ/ခုနှစ်ကို ကဒ်တွင်ကြည့်ပြီး သေချာရိုက်ထည့်ပေးပါရန်။
[카드4] ဖြည့်သွင်းငွေ ပမာဏကို နောက်တကြိမ် ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး ‘ငွေဖြည့်ခြင်း’ ကို နှိပ်ပေးပါရန်။
[카드5] နောက်တကြိမ် ငွေဖြည့်သည့် ပမာဏကို စစ်ဆေးပြီး ‘OK’ ကို နှိပ်ပါရန်။
[카드6] ၅ စက္ကန့် မှ ၁၀ စက္ကန့် အချိန်အတောအတွင်း ခေတ္တစောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်ပြီး ငွေဖြည့်ခြင်းနှင့်ဆိုင်ရာ ရလဒ်စစ်ဆေးခြင်းတွင် ရလဒ်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
တခြားသိချင်သော မေးခွန်း အကြောင်းအရာများ ရှိပါက ဆားဗဒ်စင်တာသို့ ဖုန်းဆက်မေးပေးပါရန် ။
ဘဏ်အကောင့် ပြောင်းလဲ လုပ်ဆောင်ပုံ နည်းလမ်း
1-1 ‘ဘဏ်အကောင့် ’ ဆိုသည့် ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးပါရန်။
1-2 ငွေဖြည့်သွင်းမည့် ဘဏ်ကို ရွေးချယ်ပါရန်။
[Bank2] ဘဏ်နံမည်ကို ပြောင်းလဲချင်ပါက "ဘဏ်နာမည် ပြောင်းလဲခြင်း" ကို နှိပ်ပေးပါရန်။
(ပုံမှန်အားဖြင့် နုံးယော့ဘဏ် အနေဖြင့် ပေါ်နေပါလိမ့်မည် )
[Bank3] ပုံပါ မက်ဆေ့ဘောက် ပေါ်လာရင် "OK " ကို နှိပ်ပေးပါရန်။
[Bank4] ပြောင်းလဲခြင်း ပြီးဆုံးပါက " OK " ကို နှိပ်ပေးပါရန်။
[Bank5] နောက်တကြိမ် ငွေလွဲထည့်မည့် ဘဏ်နံမည်နှင့် ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပေးပါရန်။
ဘဏ်အကောင့်သို့ ငွေလွဲထည့်ပြီးပါက ပုံပါအတိုင်း ညာဘက်အပေါ်ထောင့်နားရှိ မြှားလည် နေသည့် ခလုတ် အား နှိပ်ပေးပါရန်။
ပြောင်းလဲသွားသည့် ငွေလက်ကျန် ပမာဏကို မဖြစ်မနေ ပြန်လည် စစ်ဆေးကြည့်ပါရန်။
တခြား ထပ်သိချင်သော အကြောင်းအရာမေးခွန်း များ ရှိပါက ဆားဗစ်စင်တာသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းပေးပါရန်။
Q. thePay ဆိုတာ ဘယ်လို application ဖြစ်မလဲ ?
☎ ဆားဗစ်စင်တာ 1666-0146